एमएएफले नयाँ मार्केटिंग फेलोलाई स्वागत गर्दछ
lending8 मा सेप्टेम्बर 24, 2014 द्वारा लिखित।
तोरीलाई भेट्नुहोस्, जो सामाजिक उद्यमहरूका बारे उत्कट र एक प्रभाव पार्दै हुनुहुन्छ!
म यस गिरावटको मार्केटिंग फेलको रूपमा एमएएफको टोलीमा सामेल हुन पाउँदा म धेरै उत्साहित छु। म भर्खरको स्नातक हुँ डेभिडसन कलेज (चार्लोट, NC को बाहिर मात्र) जहाँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय विकासको अध्ययन गरें। कक्षाकोठा बाहिर, म एउटा विद्यार्थीको सामाजिक उद्यम भनिन्थ्यो, जसलाई कल गरिन्छ जीविका लागि पित्तीहरू जसले सबै प्राकृतिक मह बेचे र क्यान्सर अनुसन्धानको लागि सबै आय दान गर्‍यो, साथै यस क्षेत्रको सम्भावित प्रभावको ठूलो विद्यार्थी जनसंख्यालाई शिक्षित पनि गर्‍यो।
मैले स्नातकोत्तर जागिर खोज्न थालेपछि मलाई थाहा थियो कि म सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो काम जारी राख्न चाहन्छु, तर नयाँ उद्योगमा उद्यम गर्छु।
म त्यसबेला आएँ नयाँ क्षेत्र गठबन्धन, एक फेलोशिप प्रोग्राम जुन सेवाको एक बर्षको लागि सामाजिक क्षेत्र संगठनहरूसँग फेलोहरूसँग मेल खान्छ। नयाँ क्षेत्र तुरून्त मलाई Mission Asset Fund का साथ मिलान गर्‍यो। म झट्टै मिसनको साथ प्रेममा डुबे! वेबसाइट डाँके पछि, परियोजना क्षेत्र पढ्न र अन्य MAF कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दा, यो एक प्राकृतिक फिट जस्तो देखिन्थ्यो।
यस बर्ष, म आफ्नै ब्लग श्रृंखला लेखिरहेको छु र MAF लाई उनीहरूको हालको सामर्थ्य र समस्या क्षेत्रहरूको डाटा विश्लेषण गरी यसको सञ्चार स्ट्रिम सुधार गर्न मद्दत गर्दछु। म वित्तीय उद्योगको बारेमा जान्न प्रतीक्षा गर्न सक्दिन, MAF का सदस्यहरू र स्टाफहरू चिन्न, र यो अविश्वसनीय संगठनको विकासमा योगदान दिन।
जब म नयाँ सेक्टरमा सेवा दिइरहेको छैन, तपाईं मलाई स्थानीय कन्सर्टमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ (शास्त्रीय देखि इन्डी देखि पपसम्म सबै), जियान्ट्स वा ers 49 इयर खेल वा क्यामेरा हातमा एसएफको सडकहरूमा घुम्न।